Cunto: Sida loo Xoqdo Sphat Spit Spammer Google Analytics
Kuwa, oo og in spam gudbinta ay tahay, fahamto sida niyadjabku yahay marka uu galo Google Analytics. Isbedelka spam ee gudbinta gudbinta wargeysyada GA ayaa kor u kacay sanadihii la soo dhaafay. Haddii aad tahay mulkiilaha goobta, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loola macaamilo si looga fogaado dhibaatooyinka daran ee ay ku yeelan karto ganacsigaaga
Blackhatworth.com waa mid ka mid ah rikoodhada gudbinta ee helay mulkiilayaasha goobta iyo maamulayaasha oo xoqaya madaxyadooda. Waa goob kuugu soo direysa taraafikada bogus ama "hits been abuur ah" iyo sababaha sidaasi loo sameeyo waxay kala duwan yihiin. Qaar ka mid ah waxyaaba soo-celinta gudbinta waxaa loogu talagalay inay soo jiidato booqdayaasha goobahooda - hats for weddings nz. Waxay ogyihiin in ay jiraan goobo daabacan liisaska sooyaalka ugu sareeya. Meelaha Spamming waxay rajeynayaan in ay soo booqdaan sababtoo ah kaliya oo ka muuqda liisaskaas. Meelahani waxay sidoo kale bangiga ku saabsan xiisaha maamulayaasha goobta. Waxay rajeynayaan in marka ay kugula hadlaan, waxaad u baahan doontaa inaad ogaato sababta ay kugula xiriirayaan. Waxaad booqan kartaa boggooda si ay u eegaan, waana sida dhabta ah ee ay u baahan yihiin - taraafikada
Jack Miller, oo ah xirfadle sare oo ka socda Semt , ayaa halkan ku muujinaya siyaabaha looga takhalusi karo noocyada gudbinta noocaan ah
Sphat spamming Blackhatworth.com spam ma waxyeelo leh?
In kasta oo spam u gudbinta laga yaabo in ay u dhawaato wax aan waxyeello laheyn maxaa yeelay maaha mid la xidhiidha ficilada xaasidnimada ah sida fidinta xajinta, waa arrin culus sababtoo ah waxay saameysaa xogtaada GA.
Dadka intooda badan, Google Analytics waa qalab lagu go'aansado sameynta, xogtaada Analytics waxay kaa caawinaysaa inaad aragto goobaha kuu soo diraya taraafikada.Waxaad markaa isticmaali kartaa macluumaadkaan si aad u xoojiso sida loo wanaajiyo Qaab dhismeedka iyo content of your site iyo sidoo kale helitaanka links cusub Marka aad si dhab ah, xiriirinta tayo sare ka ah goobaha kale, goobta aad u badan tahay in ay kaalinta sare sare ee SERPs.
Dhibaatada ay keentay spam gudbinta waa in ay xajiso xogta falanqaynta webka. Macluumaadkaagu waa mid murugo leh oo ku fashilmay inay bixiyaan jaangooyooyin sax ah oo ku saabsan gaadiidka lagu hagayo goobtaada. Go'aanka la sameeyey iyadoo la adeegsanayo xogtan aan sax ahayn ayaa noqon karta waxyeello ka badan tan ay faa'iido u leedahay ganacsiga. Nasiib darro, dadka aan ka warqabin spam gudbinta ayaa sidaas samaynaya, kadibna waxay is waydiinayaan sababta ay udubdhaqaaqa SEO ayan u shaqeyn sida la filayo.
Ka gudubka Blackhatworth.com Spam Spam ka soo Google Analytics
Dejinta shaandhada loogu talagalay spam gudbinta ee GA waa mid ka mid ah siyaabaha waxtarka leh ee looga saari karo gaadiidka been-abuurka ah ee ka imanaya goobaha spamka. Filimadu waxay daryeeli karaan goobo si toos ah u diraya taraafikada GA si toos ah iyo sidoo kale kuwa isticmaala bots si ay u soo booqdaan goobtaada
Ku soo gal koontadaada GA-gaaga iyo muuqaalka-fiirsashada, guji Abuur cusub oo ku siin magaca
Abuur shey cusub adoo gujinaya Filters> Farsam Cusub. Magaca filimka cusub 'blackhatworth.com waa wanaagsan'.
Ka dib markaad dooranaysid nooca filter-ka caadada ah, guji Ka-dhaaf iyo faylka Foomka Fudud (Filter Field) hoos-u-dhig doorasho
Foomka Qalabka Filter, waxaad gashaa blackhatworth \_ .com ka dibna keydiso goobahaaga
Waxaad u sameyn kartaa arrintan wixii kale ee gudbin kale ee spam kuwaas oo laga yaabo inay ka muuqdaan warbixinnadaada GA. Hubi in kahor fayl-gareeyo domain kasta oo aad marka hore hubiso inaad xaqiijiso in dhab ahaantii tahay gudbiye spam. Ma doonaysid inaad xayeysiiso goobaha dhabta ah iyo baaba'a dhabta ah ee baabuurta dhabta ah